၁. ငယ်​စဉ်​တည်းက စာဖတ်​တာ ၀ါသနာပါသူ။
လူ​တွေဟာ စာ​စော​စောဖတ်​​လေ​လေ ပိုပြီးဥာဏ်​​ကောင်း​လေ​လေပဲလို့ ​လေ့လာစမ်းသပ်​မှု​တွေအရသိရပါတယ်​။ သင့်​ဘေးက လူ​တွေထက်​သင်​​တော်​​နေပြီဆိုရင်​​တေ့ာ သင်​ဟာ သူတို့ထက်​ ​စာဖတ်​တာ ​စောခဲ့လို့ပါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက စာဖတ်တာ ၀ါသနာပါသူများဟာ ဥာဏ်ကောင်းသူတွေ ဖြစ်လာကြပါတယ်။
၂. ​ငယ်​စဉ်​က ဂီတဆိုင်​ရာ ​လေ့ကျင့်​ခန်း သင်​ယူဖူးသူပါ။
လေ့လာ​တွေ့ရှိမှု​တွေအရ ဂီတဆိုင်​ရာ ​လေ့ကျင့်​ခန်း​တွေဟာ ဥာဏ်​​ရည်​တိုး​စေပြီး ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ထိန်းချုပ်​နိုင်​စွမ်း တိုး​စေတာပါတယ်​။ ငယ်​ငယ်​ကတည်းက ဂီတဆိုင်​ရာ ​လေ့ကျင့်​ခန်း​တွေကို သင်​ယူဖူးသူ​တွေက​တော့ သာမန်​ထက်​ပိုပြီး ထူးချွန်​ကြပါတယ်​။
သင်​ဟာ ဟာသဥာဏ်​ကြွယ်​သူတစ်​​ယောက်​ဆိုရင်​​ ကိုယ့့်​ကိ်ုကိုယ်​ဂုဏ်​ယူလိုက်​ပါ​တော့။ ဟယသဥာဏ်​ကြွယ်​သူ​တွေက အရမ်းဥာဏ်​​ကောင်းတယ်​လို့ ​လေ့လာစမ်းသပ်​မှု​တွေအရ သိရပါတယ်။
၄. သင်​ဟာ ပူပန်​တတ်​သူတစ်​​ယောက်​။
ဘယ်​သူမှ​တော့ စိုးရိမ်​​ကြောင့်​ကြ​နေရတာ မကြိုက်​​ပေမယ့်​ ​လေ့လာစမ်းသပ်​ချက်​​တွေအရ ပို​တော်​တဲ့သူ​တွေဟာ စိုးရိမ်​မှုပို​များ​ကြောင်း​ တွေ့ရှိရပါတယ်​။ စိုးရိမ်​ပူပန်တတ်​သူ​တွေဟာ ပိုပြီး အာရုံစိုက်​နိုင်​ကြပြီး အလုပ်​တစ်​ခုပြီးတစ်​ခု ပြီး​အောင်​ လုပ်​​ဆောင်​နိုင်​စွမ်း ရှိကြပါတယ်​။
၅. သင်​ဟာ ဘယ်​တန်​တစ်​​ယောက်​ပါ။
ဘယ်​တန်​​တွေဟာ ငယ်​စဉ်​တည်းက အ​ဆော့မက်​ပြီး ကြီးပြင်းလာကြတာပါ။ အခုလို နည်းပညာ​ခေတ်​ကြီးမှာ​တောင်​ ဘယ်​တန်​​တွေ ဘာ​ကြောင့်​ဥာဏ်​​ကောင်းတယ်​ဆိုတာ ​မရှင်းပြန်ိုင်​​ပေမယ့်​ ​ယောက်ျား​လေး ဘယ်​တန်​​တွေဟာ ဥာဏ်​​ကောင်းမှန်း အရမ်းသိသာပါတယ်​။
စိတ်ဓာတ်ကျ အားငယ်ဝမ်းနည်းတဲ့အခါ ဒီ ၅ ချက်ကိုသတိရပါ။
ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်က ဘာလဲ
စည်းကမ်းဆိုတာ လိုက်နာရမယ့် အရာတွေကို ပြောတာလား